Kedu ihe bụ oge ala na otu esi atụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ọtụtụ oge, ị nwere ike ịgụ na m posts okwu "Oge oge". Enwere ike iji ogo a anyị ji arụ ọrụ rụọ ọrụ maka ikwu maka jioloji na mbido ụwa ma ọ bụ ụwa. Buru n'uche na ogo mmadụ nke anyị na-arụkarị ọrụ bụ ihe dịka afọ 100 n'otu n'otu. Otú ọ dị, oge apụtaghị ihe ọ bụla na usoro nhazi ala. Nke ahụ bụ ebe anyị ga-ekwu maka oge geologic.
Ihe omumu nke uwa kwesiri inwe otutu uzo nke puru ichikota usoro ihe omumu nke ala dika ha meworo n’ezie. Ya mere, taa, anyị ga-ekwu maka oge maka ọdịdị ala. Youchọrọ ịma ka ndị ọkà mmụta banyere mbara ala si ede ụbọchị na ụbọchị ihe omume ala na ụwa anyị?
1 Nkọwapụta oge maka ọdịdị ala
2 Omume na ihe omumu banyere ala
3 Ngalaba nke ala
Nkọwapụta oge maka ọdịdị ala
Iji kpokọta ozi banyere ala anyị niile, anyị na-eji oge a. Mgbe anyị na-ekwu okwu, dịka ọmụmaatụ, banyere ịmepụta nkume dị iche iche, anyị na-ekwu maka mkpokọta nke ihe site na nrụgide. Ọzụzụ a adịghị eme na ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnwa. Ọ bụ karịa, Ọ naghị eme n’ime otu narị afọ. Usoro nke imepụta nkume sedimentary dị ka sandstone na-ewe ọtụtụ puku afọ. Ndi mmadu abughi obere ntabi na akuko banyere mbara ala nke uwa.
Iji mee ka usoro ihe omumu nile di na oke nke anyi nwere ike iru oru na ya, anyi na eji Eons, Geological Ages, oge na oge. N'adịghị ka oge nkịtị anyị ji arụ ọrụ, oge oge anaghị enwe oge. Nke a bụ n'ihi na enwere agbatị na akụkọ ntolite ụwa ebe ihe ndị ọzọ dị ịrịba ama mere. Achịkọtara ihe omume ndị a na lugwu guzobere, mbuze, ikpochapu oke, wdg
Site na njirimara na ntuziaka ndị a niile, anyị nwere ike ịkọwa oge oge maka oge nke sitere na mmalite na mmepe nke ụwa (ihe dị ka ijeri 4,5 afọ gara aga) ruo ugbu a. Na nkenke, ọ dị ka ọ bụ kalenda Earthwa.
Omume na ihe omumu banyere ala
Ndị ọkà mmụta mbara ala na ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ na-ejikarị oge a eme ihe. Daalụ ya, Ha nwere ike ekenye oge na ụbọchị maka mmemme kachasị mkpa n’ụwa. N'ime nkume bụ ebe ị ga-ahụ ozi ndị ọzọ gbasara ihe mere na ụwa anyị n'ime afọ ijeri 4,5 ndị ​​a niile.
Ruo narị afọ nke XNUMX, e chere na ụwa dị naanị puku afọ ole na ole. Ezigbo ihe omuma nke ala biara site na nchoputa nke redio site n'aka Marie Curie na XNUMXth century. Site na nke a, ọ ga-ekwe omume ịbe oge nkume nke ala ụwa na meteorites na-ada.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ikwu maka oge jioloji, anyị enweghị ike iji nkeji nke oge dịka iri afọ ma ọ bụ ọtụtụ narị afọ. Zọ kachasị baa uru bụ iji kesaa oge site na nnukwu mmemme ala. Na nkenke, ọ bụ maka nnukwu mgbanwe nke okwute na ihe ndị dị ndụ tara ahụhụ kemgbe mmalite ụwa anyị.
Ngalaba nke ala
Na oge geologic, nke kachasị oge ejiri mee bụ eon. E kewara eon a n'oge, oge, oge, na nkebi. E kewara akụkọ ntolite nke ụwa n'ime nnukwu Afọ abụọ nke oge. Nke mbụ bụ Precambrian, ebe formedwa hiwere ihe dịka ijeri afọ 4,5 gara aga. Ọ kwụsịrị ihe dị ka nde 570 afọ gara aga. Anyị nọ ugbu a na Phanerozoic Aeon. Eons abụọ a buru oke ibu, yabụ anyị chọrọ obere oge.
Anyị ga-amụ ihe omimi nke otu akụkụ nke oge ala:
Ọ bụ ya kachasị ukwuu na ọkwa oge. A na-atụle ya kwa afọ 1.000 ijeri. Iga site na Precambrian ruo Phanerozoic bụ maka mgbasa nke nnukwu mba ụwa a na-akpọ Pannotia. Phanerozoic pụtara "ndụ a na-ahụ anya." Ndụ dị adị tupu mmalite nke oge a, mana nke a bụ ebe ha dị mgbagwoju anya ma malite.
Oge ahụ abụghị otu. Ọ na-edozi mgbanwe dị mkpa ma ọ bụ mgbanwe ndụ nke ụwa tara ahụhụ kemgbe ọ malitere. Oge ọ bụla na-amalite site na ihe omume dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, Mesozoic na-amalite site na mpụta nke nnụnụ mbụ na anụmanụ.
Afọ nke oge geologic bụ: Azoic, Archaic, Proterozoic, Paleozoic (ndụ oge ochie), Mesozoic (ndụ dị n'etiti), na Cenozoic (ndụ na-adịbeghị anya). Ebe ọ bụ na oge ndị ahụ buru oke ibu na oge, ọ dị mkpa ibelata nkewa ahụ maka izi ezi karị.
Ọ bụ ihe gbasara nkeji nke oge. Oge nke ọ bụla na-egosi ihe omume ala ma ọ bụ ọdịdị nke ihe dị ndụ nke na-eje ozi dị ka akara. Dịka ọmụmaatụ, na oge Cambrian, nnukwu mba ụwa a na-akpọ Pangea na-agbaji.
Oge oge bụ oge nke oge. N’oge ọ bụla banyere ala, a na-edetu ya n’ọ̀tụ̀tụ̀ pere mpe. Dịka ọmụmaatụ, na Paleocene enwere nkewa nke Europe na North America. Ọ bụ ezie na n’ọtụtụ map nke oge geologic oge ikpeazụ edere ya bụ Holocene, ụwa agaala ya. Anyị nọ ugbu a na Anthropocene. Ọ bụ ihe mere n’oge mbụ nke omume mmadụ kọwara.
O doro anya na mmadụ enweela nnukwu nsonazụ n’ụwa. Karịsịa, site na mgbanwe nke mmepụta ihe na taa, mgbanwe nke mbara ụwa agụtala ngụkọta. Ebumpụta ụwa nke ụmụ mmadụ na-agbanwebeghị dị ụkọ. Mụ mmadụ enweela ike ịbanye ma dozie mpaghara ahụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
Nnukwu mgbanwe na ụwa niile dịka mgbanwe ihu igwe na-ebute ihe ọkụkụ gas na-esi na ọrụ anyị. Dị ka ọ dị na ozone oyi akwa, nke na-adịgide adịgide, anyị jisiri ike weta ya n'ime iri afọ ole na ole. Anyị na-ekwu okwu banyere otu mmezi pụtara na ihe dị ka afọ 300. Ọnụ ọgụgụ ụwa niile n'afọ 1750 erughị otu ijeri ndị bi na ya. Agbanyeghị, taa, anyị karịrị 7,5 ijeri. A na-atụ anya na site n’afọ 2050, anyị ga - eru ihe dịka ijeri iri.
Dịka ị pụrụ ịhụ, akpịrịkpa mbara ala dị ezigbo mkpa iji wepụta okike oge ochie na iji ghọtakwuo mmalite ụwa anyị. Gị onwe gị, ị maara banyere oge gbasara ala?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ oge ala na otu esi atụ ya?
NKWEKỌR OF OFWA PLWA B IS N'ISLỌ NCHE N'WITHLỌ NCHE A NA ONYE Ọ B EVLA!
Zaghachi FERNANDO GRANADOS GUZMAN
Martha Rodriguez dijo
N’oge na-adịbeghị anya, m nụrụ otu okwu na telivishọn na achọrọ m ịjụ ime nnyocha ndị ọzọ. Anụrụ m na enwere mmekọrịta dị n'etiti ugboro ugboro nke ebili mmiri ụbụrụ na echiche nke echiche nke oge mmadụ na mgbanwe ụfọdụ mmegharị nke ,wa, amaghị m ma ọ bụrụ na "ọ bụ nri" ma ọ bụ na mmegharị ahụ nke bụ oscillation nke okporo osisi, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe "magnetik" nke ụwa anyị.
Ajụjụ m ga-achọ ịkọwa bụ ihe anụ ahụ, mmegharị ma ọ bụ ihe magnetik nke ụwa anyị nwere ike inwe mmekọrịta a na mmetụta nke ugbu a oge na-agafe ngwa ngwa. Daalụ n'ọdịnihu.
Zaghachi Marta Rodriguez
Peter Sibaja dijo
Ihe onyonyo izizi nke na ekewa oge maka ala gi bu nke gi, ya bụrụ otu, kedu afọ eweputara oru a?
Zaghachi Pedro Sibaja
Biomass, ihe niile ịchọrọ ịma banyere ume ọhụrụ a